Kachin Duwa: ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စီးပွါး ရှာနေပြီလား?
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စီးပွါး ရှာနေပြီလား?
သိန်းစိန် အစိုးရ မတက်ခင် လက်ရှိသမ္မတ ၀န်ကြီးချုပ်ဘ၀ ကတည်းက ကိုးကန့်ကနေ ဇာတ်ရှုပ်လာတာ ကေအိုင်အေ ကိုလဲ အဲဒီတုန်းက ရာဇသံ ပေးဖူးတယ်။ မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်က ကြံ့ဖွတ်ပါတီဝင်တွေ ရှေ့မှာ ၀န်ကြီးချုပ်ကြီး ဦးသိန်းစိန်ပြောသွားတာက အစိုးရ သစ်တက်လာရင် ကေအိုင်အေ ကို အရှေ့တောင်အာရှမှာ စံနမူနာ အနေနဲ့ တပတ်အတွင်း အပြီးတိုင် ချေမုန်းပြစ်မယ်၊ ဆိုသတဲ့။ သူကိုယ်တိုင် သမ္မတ ဖြစ်လာမယ် ဆိုတာ ကြိုတင်သိနေတဲ့ အတိုင်းပဲ။
တကယ်ပဲ သူ သမ္မတဖြစ်ပြီး ၃ လ အကြာမှာတော့ စတိုက်ပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့်၊ တဖက်မှာလဲ နိုင်ငံတကာ ရောက်နေတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သမားများ နဲ့ ပညာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ အရင်က အတိုက်အခံ လုပ်နေတဲ့ ပညာရှင်အုပ်စု တွေနဲ့ ပေါင်းမိခဲ့တယ်။
အဲဒီ နိုင်ငံတကာ မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်တွေကြားမှာ ရှင်သန်လာတဲ့ ပညာရှင် အုပ်စုဟာ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များ ဘာကြိုက်တယ် ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိနေတော့ သမ္မတကြီးကို အကြံအဥာဏ်တွေ ပေးလေပြီ။
အဲဒါကတော့…. ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဆိုတဲ့ စာသားလေးပါ။
သမ္မတကြီးကလဲ သူ့အထင် တပတ်အတွင်း အပြတ်တိုက်ဖို့ကြံထားတဲ့ ကေအိုင်အေ စစ်ပွဲကလဲ မလွယ်မှန်းသိလာတယ်။ ဒီတော့ ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလ ကနေ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတဲ့ စကားကို စပြောပါတော့တယ်။
ဒီတော့ နော်ဝေ နိုင်ငံက ချက်ချင်း ဆိုသလို ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အထောက်အပံ့ပေးမယ်ပေါ့။ ဒီတော့ Peace-center ဆိုတာ နေ့ချင်းညချင်းပေါ်လာတယ်။ နိုင်ငံခြားက ဒေါ်လာအလုံးအရင်း ၀င်လာဖို့ကလဲ အရေးကြီးတယ်လေ။ ဒါမှလဲ လက်နက်ဝယ်လို့ရမှာကိုး…. လက်နက်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်တယ် ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမှာပါ။…
နောက်တခုက အဲဒီ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့ပဲ စီးပွါးရေး ပိတ်စို့မှုတွေ အတော်အသင့် ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တယ်။ ဦးပိုင် အုပ်စုတွေ ၀မ်းသာအားရနဲ့ သမ္မတကြီးကို လေဆိပ်မှာ ကြိုခဲ့ကြတယ်။
ခက်တာက နောက်ထပ် အပြီးတိုင် ရုပ်သိမ်းဖို့လိုနေတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာကြီးလဲ ဇာတ်မျောခဲ့ရတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ညစာစားပွဲကြီး ပြစားဖို့ အပွကြီးကြံခဲ့ပေမယ့် ကေအိုင်အိုအဖွဲ့က ရောက်မလာခဲ့ဘူး။
ကေအိုင်အို ထင်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ အခု ရှမ်းကို ချနေပြီ။
ဦးအောင်မင်း နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ဟာ အစိုးရ ရဲ့ ထောက်ပံ့မှုလုံးဝ မလိုပဲ နိုင်ငံတကာ အကူအညီနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးတွေ သွားနေတာဟာ အကျိုးများများ ရစေတယ်။
(၁) လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးကို တပြိုင်ထဲ တိုက်စရာမလိုအောင် ကျန်အဖွဲ့တွေကို ငြိမ်းချမ်းရေး ဇာတ်မျောအောက်မှာ ထိန်းထားပြီးသား ဖြစ်သွားတယ်။
(၂) နိုင်ငံတကာမှာ မျက်နှာရပြီး စီးပွါးရေး ပိတ်စို့မှု ရုပ်သိမ်းဖို့ အခြေအနေကောင်း ဖန်တီးပေးတယ်။ နောက်ပိုင်း လက်နက်ဝယ်ယူခွင့်ကိုပါ ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေး စကား ဆက်ပြောရအုံးမယ်။
(၃) နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များ၊ INGO, NGO များ အများအပြားဝင်လာပြီး ဘဏ်တွေမှာ ဒေါ်လာတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်လာတယ်။ လက်နက်ဝယ်ယူရေးမှာ နိုင်ငံခြားငွေဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ်ဘဏ်မှာပဲ ရှိနေရှိနေ ပြည်တွင်းဘဏ်မှာ နိုင်ငံခြားငွေရှိနေတာဟာ အစိုးရ အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူလို့ ရနေတယ်။ ပြည်သူတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ လူမှုရေး ကိစ္စတွေမှာ NGO တွေ တာဝန်ယူနေတဲ့အချိန်၊ နိုင်ငံတော် ဘက်ဂျက်ကို စစ်အသုံးစရိတ် များများ သုံးလာနိုင်စရာ ရှိလာတယ်။
ဒေါ်စု ကို ငြိမ်းချမ်းရေး စကားဝိုင်းမှာ အပါမခံတာကလဲ ဒီအကြောင်းလေးတွေ ရှိနေလို့ပါ။ လက်ပံတောင်းတောင်မှာတော့ သူတို့ ရှုပ်ထားသမျှ ရှင်းပေးရမယ်လေ။ ဒေါ်စု တင်မက ပါဘူး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တကယ်လိုလားပြီး လှုပ်ရှားသူတွေကိုတော့ အစိုးရက ကြည်တာမဟုတ်။
ဒါတွေကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဟာ လက်ရှိအစိုးရ အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေဆဲပါ။
ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့.... ငရဲခန်းက ကျွတ်ပါအုံးမလား....